Madaxweynaah Galmudug iyo mas’uuliyiinta Puntland oo furey waddooyinkii xirnaa ee Gaalkacyo – Radio Muqdisho
Madaxweynaah Galmudug iyo mas’uuliyiinta Puntland oo furey waddooyinkii xirnaa ee Gaalkacyo
Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) Madaxweynaha Galmudug,Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed S/Gaas Cabdiwali Jaamac (Gorod) iyo Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxaa ay si rasmi ah u fureen wadooyinkii ku xirmay dagaalkii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo.
Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii halkaasi uu gaarey wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Galmudug,kuwaasi oo howlo nabadeed ka dhexwada bulshada kunool magaaladaasi Gaalkacyo.
Madaxweyne Xaaf oo ay wehliyaan saraakiil iyo mas’uuliyiin ayaa lagu arkayay wadooyinka magaalada Gaalkacyo,iyagoo ka qaaday jidgooyooyin halkaasi yaalay.
In muddo ah waxaa kala xirnaa isu socodka dadka labada dhinac ee magaaladaasi Gaalkacyo,waxaana haatan lafilayaa in dadku ay dib u bilaabaan ishdexgal.
WAR-BIXIN:- Socdaalka Tahriibka oo Qatar geliya dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed